Our Vision and Our Mission » Technological University (Hmawbi)
Home » Our Vision and Our Mission
နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရာတွင် လိုအပ်သော အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့်အင်ဂျင် နီယာနှင့်ဗိသုကာပညာရှင်များကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်သည့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု နည်းပညာတက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်လာစေရန်။
To become internationally recognized, high-ranking University that nurtures highly qualified Engineers and Architects who are needed in building the Nation, Myanmar.
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်ဆန္ဒရှိပြီး ဆောင်ရွက် နိုင်စွမ်းလည်းရှိသော ပညာရှင်ကျင့်၀တ်ကို ကောင်းစွာနားလည် သဘောပေါက်ပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးသော အရည်အချင်းမြင့် အင်ဂျင်နီယာနှင့် ဗိသုကာပညာရှင်များ ပြုစုပျိုးထောင်ရန်နှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဆောင်ကျဉ်း ပေးနိုင်သောပညာရေး ဝန်းကျင်ကောင်း များအဖြစ် ဖန်တီးဆောင်ရွက်ရန်။
Fostering our students with strong desire in conducting social activities and intellectually stimulating to qualified Engineers and Architects who understand professional ethics well and creating innovative academic environment for all-around development of community.
အရည်အသွေးမူဝါဒ (QUALITY POLICY)
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မှော်ဘီ)သည် သင်ကြားခြင်း၊ သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်ခြင်းများဖြင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့် သုံးစွဲသူ များအား အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ပညာရေးရရှိနိုင်ရန်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်မည်။
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မှော်ဘီ)သည် သီအိုရီနှင့် လက်တွေ့ပေါင်းစပ်သည့် သင်ကြားသင်ယူမှု ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းအား အသုံးပြု၍ နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အရည်အသွေး ပြည့်ဝသော အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဗိသုကာ ပညာရှင်များ မွေးထုတ်ပေးမည်။
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မှော်ဘီ)အား Autonomous University အဖြစ်ရပ်တည် နိုင်ရေးအတွက် အရည် အသွေးပြည့်ဝသော တက္ကသိုလ်အဖြစ် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်မည်။
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မှော်ဘီ)သည် အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အား ISO 9001:2008 စံနှုန်းနှင့် အညီ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အစဉ် တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျောင်းသူကျောင်းသား များနှင့်သုံးစွဲသူများအား စိတ်ကျေနပ်မှုကိုရရှိစေမည်။
The Management of the University shall take the responsibility of customer satisfaction through using the proper teaching-learning process, doing researches and technological innovations.
Technological University (Hmawbi) shall nurture an intellectual culture that integrates theory with practical teaching-learning process to produce well-qualified engineers and architects for the development of the nation.
The Management of the University shall ensure that the Technological University (Hmawbi) is well-qualified and stands as an Autonomous University.
The Management of the University is committed to comply with the requirements of ISO 9001:2008 standards and effectiveness of the policy shall be reviewed annually and when and where necessary for continually improvement of the Quality Management System.
အရည်အသွေးရည်မှန်းချက်များ (Quality Objectives)
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင်နှစ်အတွက် အရည်အသွေးရည်မှန်းချက်များနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ –
၁။ အင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများတွင် တက်ရောက်သင်ကြားနေသော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ ပြုန်းတီးနှုန်း (drop out) သည် (၅%) အောက် လျော့နည်းစေရန်။
၂။ ၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ခု ပညာသင်နှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ၏ အရည်အချင်း အသိအမှတ်ပြုစိစစ်သည့်အဖွဲ့မှ အရည်အချင်းအသိအမှတ်ပြုခြင်းကို စတင်ရရှိစေရန်။
၃။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မှော်ဘီ)သည် အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ ISO 9001:2008 စံသတ်မှတ်ချက်အရနှင့် တက္ကသိုလ်၏ အရည်အသွေးမူဝါဒများအရ သုံးစွဲသူစိတ်ကျေနပ်မှု(Customer Satisfaction) ရှိ/မရှိစိစစ်ခြင်းကို ၉၀% ရရှိသည်အထိဆောင်ရွက်ရန်။
The Quality Objectives of Technological University (Hmawbi) in 2014-15 Academic Year:
To reduce the percentage of undergraduate engineering & architecture students’ drop-outs to less than 5%.
To attain the level of educational qualification recognized by Myanmar Engineering Council in the academic year of 2015-16.
To assess customer satisfaction according to ISO 9001:2008 and quality policy of Technological University (Hmawbi) and to make an effort to get customer feedback by 90%.
2017-2018 Academic Year Mid-Term Exam Grading
Fifth Year Grading
Fourth Year Grading
Third Year Grading
Second Year Grading
© Technological University (Hmawbi)